Hiran State - News: HS:- Shir dhinaca isgaarsiinta ah oo dhax maray
HS:- Shir dhinaca isgaarsiinta ah oo dhax maray
HS:-Shir dhinaca isgaarsiinta ah oo siweyn looga soo shaqeeyey kana soo qeyb galeen ku dhawaad dad kor u dhaafaya 500 oo qeybaha kala duwan ee bulshada Hiiraan ayaa dhex maray wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga iyo qurba joogta Hiiraan walow Soomaliya ay ka soo galeen qaar ka mid ah shacabka oo ku kala sugnaa Hiiraan iyo Mogdisho.
Ujeedada ugu weyn ee shirka ayaa ahaa in wasiirka siiyo qurba joogta meesha ay wax u marayaan iyo halka ay marayaan dadaaladii ay dhawaanahan ka wadeen masuuliyiintii ka socotay dowlada ee ka soo jeeday Hiiraan.
Sikasta oo ay ahaataba waxaa lagu soo dhaweeyey madasha oo furay wasiirka isagoona bilaaw iyo dhamaad siiyey warbixin qurba joogta oo runtii sanadahii danbe aad ugu xiran Hiiraan iyo Soomaaliya. wasiirka ayaa si fiican oo degan u sharaxay warbixintii ugu danbeyna u sheegay qurba joogta waxii uu kala soo kulmay waxgaradkii, aqoonyahanadii, culimadii, dhalinyaradii iyo haweenkii reer Hiiraan ee uu kula soo kulmay magaalada Belet Weyne mudadii ay isaga iyo waftigii uu hogaaminayey ay halkaasi ku sugnaayeen.
Ugu danbeyn qurba joogtii ayaa aad u soo dhaweeyey iney iyagu taageerayaan waxkasta oo ay aqbalaan waxgaradka Hiiraan ku sugan maadama ay iyagu naga ogyahiin xaqiiqada iyo nolosha rasmiga ah ee halkaasi ka jirta ayuu u badnaa hadalkii inta badan qurba joogta ay wasiirka u gudbiyeen.
Wasiirka ayaa sharaxaad ka bixiyayey maamulka ay doonayaan in ay Hiiraan u sameeyaan noociisa waxuuna faah faahin buuxda ka bixiyey qaabka uu maamulka noqonayo iyo walba sida ay waxgaradkii ay halkaasi ugu tageen ugu go'an tahay in ay Hiiraan noqoto goob nabadoon oo leh maamul adag kuna yimid wadatashi sidaasi daraadeed qurba joogta oo uu horey uga mid ahaa wasiirka ayaa uga mahadceliyey wadatashiga uu wasiirka kala yeeshey arintaan waxeyna ku booriyeen in wasiirada amaba masuuliyiinta isaga kedib imaan doonta ay sidaan dal iyo dibad ula tashadaan shacabka ay metelaan.
Shirka oo qaatay ku dhawad 5 saacadooda waxii ugu muhiimsanaa ee ka soo baxay ayaa waxa ka mid ahaa in lagu dadaalo wada noolaanshaha iyo wadajirka bulshada Hiiraan iyo Soomaaliweyn. waxaana wasiirka lagu dhiirageliyey in ay arinta u maareeyaan qaabkasta oo ay xal u arkaan siyaasiyiinta iyo waxgaradka Hiiraan siiba kuwooda ku sugan Hiiraan ayna soo dhaweeyanayaan waxkasta oo ayba reer Hiiraan ku helayaan nidaam iyo kala danbeyn.
Sidoo kale waxaa xusid mudneyd in madasha shirka noocyada kala duwan ee gabayga laga tiriyey oo rag iyo dumarba halkaas gabayo guubaabo iyo dherigalin u noqon kara siyaasiyiinta Hiiraan iyo waxgaradka gudaha ku sugan laga soo jeediyey.
Isku soo dhuuboo waxuu ahaa shir ku dhamaaday is faham iyo guul iyadoona lagu balamay in la joogteeyo shirarka noocaani ah. marka laga soo tago shirka dhax maray wasiirka qorsheynta iyo xiriirka Caalamiga Dr Cabdullaahi Godax Bare iyo jaaliyada reer Hiiraan ee qurbaha qaarkood hadane waxaa lagu wadaa in Hiiraan loo sameeyo dhawaantan maamul ku yimid wadatashi oo ilaa heer gobol ah xiriir wanaagsana la leh dowlada kumeel gaarka kaasi oo hada u muuqda midka ay bulshada Hiiraan yeelan doonaan xili aan hada si rasmi ah loo shaacin laakinse aan fogeyn.
· admin on February 12 2012 12:13:49 · 0 Comments · 1877 Reads ·
14,614,561 unique visits